Izilwanyana kunye Nendalo Imigaqo yeMarine Biology
I-Baleen yinto eqinile, kodwa iguquguqukayo eyenziwe ngekeratini, iprotheyini leyo yinto efanayo efanayo eyenza iinwele zethu kunye neminwe. Isetyenziswe yimikhomo ukucoca ixhoba lawo kumanzi olwandle.
Iiminyango kwi-Suborder Mysticeti zinamacwecwe angamakhulu angama-baleen axhoma kumhlathi wazo ophezulu. Njengeminwe yethu, i-baleen ikhula ngokuqhubekayo. Iiplanga ze-baleen zi malunga neekota-intshi kwaye zihamba ziphezu komda ongaphandle kodwa zibe nomphetho onoboya ngaphakathi.
Umphetho kumacwecwe uguqa kwaye udale umgcini ofana nesinyani ngaphakathi komlomo we-whale. I-whale isebenzisa le-strainer ukuba igibe ixhoba layo (ngokuqhelekileyo inhlanzi yesikolo encinci, i- crustaceans okanye iplankton) ngoxa ihluma amanzi angaselwandle, angenakukusela kakhulu.
Eminye imikhomo ye-baleen , njengengonyama ye- humpback , idla ngokukhupha ixabiso elikhulu lexhoba kunye namanzi, besebenzisa ulwimi lwabo ukuphoqa amanzi phakathi kwamacwecwe e-baleen. Ezinye iimikhomo, njengemikhomo efanelekileyo, zixhamla kwaye zihamba ngokuthe ngcembe emanzini ngemilomo yazo evulekile njengoko amanzi ehamba phambi komlomo naphakathi kwe-baleen. Endleleni, i-plankton encinci ibanjwe ngunwele efanelekileyo ye-baleen.
I-Baleen ibaluleke ngokusemthethweni njengoko yayifunwa ngabadlali be-whalers, abayibiza ngokuba yi-whalebone, nangona kungenziwa yithambo nonke. I-baleen yayisetyenziswe kwizinto ezininzi ezifana ne-corsets, i-buggy whips, kunye ne-umbrella.
Kwaziwa nangokuthi : iWhalebone
Imizekelo: I-whale ekupheleni iphakathi kwe-800-900 i-baleen iplate exhonywe kumhlathi wayo ophezulu.
Indlela yokudala i-Homeschool Transcript
Ikhefu (Ukuthetha nokubhala)
IKrisimesi yeeNcwadi zeNtandokazi
Ukuhlaziywa kwesiNgesi kweNkcazelo yesiGrike
Igama le-HARRISON igama kunye nomthombo
Lawula Umqwenguli Wakho Ngaphandle koMnxebi